Amerika Latina · Oktobra, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Oktobra, 2020
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Oktobra, 2020
Ekoatora 26 Oktobra 2020
Mandritra ny valanaretina, antenain'i El Salvador ny hanome aina vao ny sehatry ny fizahantany ampiarahana amin'ny fanovàna endrika ny vakoka nentindrazana
El Salvador 25 Oktobra 2020
"Mba hamerenana indray sy hireharehàna amin'ny maripanondroana maha-Salvadoriàna, atombotsika androany ny fandefasana ny marika El Salvador fitodian'ireo mpihazatany, nalaina avy amin'ny asakanton'i Fernando Llort."
Kolombia: Fetiben'ny zavakanto, tononkalo ary voninkazo tany Medellín
Kolombia 18 Oktobra 2020
Nanoratra momba ny famaranana ny Fetiben'ny Zavakanto MDE07 ireo bilaogera kolombiana, hetsika iray miezaka ny hamerina ny zavakanto maoderina ho amin'ny fifanakalozan-kevitra ao an-toerana sy hamerina izany ho an'ny fiainana andavan'andron'ny olompirenena. Niresaka momba ny fetiben'ny Tononkalo Iraisampirenena sy ny Foaran'ny Voninkazo ihany koa izy ireo.
Goatemalà 17 Oktobra 2020
"Mihira tsy amin-tahotra izahay, mitaky ny rariny izahay; Miantsoantso ho an'ny vehivavy nanjavona rehetra izahay."
Arzantina 11 Oktobra 2020
Però 04 Oktobra 2020
Venezoela: Mitantara ny tantaran'ny firenena amin'ny alàlan'ny sarimihetsika
Venezoela 03 Oktobra 2020
Nahavita nampiseho ny tantaran'ny firenena sy nampifanaraka ny sanganasan'ny literatiora malaza tamin'ny alàlan'ny sarimihetsika izay nankasitrahan'ny besinimaro ny vondrona tanora mpanatontosa sarimihetsika Venezoeliainna. Heverina ho tena maherisetra ireo sarimihetsika Venezoelianina maro tany aloha ary maneho ny fahaiza-mamorona vaovao ny fipoiran'ity karazana sarimihetsika vaovao ity.